NABAD IYO NOLOL HADII AY XISAABTA MARKII HORE SI QALDAN ISUGU DHUFSADEEN HADANA MASIDII BAY MOODAAN? – HORNAFRIC MEDIA
Markii ay dalka Xukunkiisa Qabteen Nabad iyo Nolol waxaa Miiska Saarnaa Arimo muhiim ah oo dan u ahaa dalka iyo Dadka Soomaaliyeed. Arimahaas waxaa ka mid ahaa in Dalka loo sameeyo Ciidamo Qaran oo isku dhaf ah ayadoo laga keenayo Ciidankaas 18kii Gobol ee hore.
Waxaa kaloo yaalay in lala Dagaalo Nabad Diidka lana gaarsiiyo dalka doorasho hal qof iyo hal Cod ah.
Ayaandaro, Nabad iyo Nolol waxay ogaadeen in aysan taas dan ugu jirin waxay markaas taas badalkeeda bilaabeen in ay Duulaan Qaawan ku qaadaan Gudoomiyihii Gollaha Shacabka Soomaaliya Jawaari.
Da’daal badan oo ay Xukuumadu gashay kadib waxaa u suurtoobi waayay in ay ku guulaysato in ay meesha ka Tuurto Jawaari. Markaas ayaa Xukuumada Nabad iyo Nolol waxay bilowday in ay Boogaha Jawaari dhaydo baalahana u buuxiso.
Jawaari oo Qoslaya ayaa baneeyay Kursigii aamusna ku darsaday. Maalmo kadib, waxaa lagu badalay Mursal.
Intaas Duulaanka Nabad iyo Nolol kuma e kaane waxaa Dagaal lagu qaaday Madaxwaynihii Hirshabelle,kii Koonfur Galbeed, Shariif Xassan, iyo Kii Galmudug, Xaaf.
Dhamaan Madaxdaan waxay ahaayeen mid Xoog lagu tuuro iyo mid Jeebka loo qooyo oo baneeya Kursiga.
Hankii iyo Hamigii Nabad iyo Nolol intaas kuma joogsane waxay Diideen in ay a qoonsadaan Doorashadii uu ku guulaystay Juballand Ahmed Islaan, waxayna ka qabsadeen deegaano uu xukumay Madaxwaynaha Juballand Axmed Islaan.
Waxaa suubis loogu daray Madaxwayanaha Juballand in lagu kiciyo Cayayaan dhaqaalle badan la siiyay si qalqal siyaaasadeed loo gasho markaasna meesha si fudud looga tuuro.
Markii ay Suurtoobi wayday isku daygii lagu tuuri lahaa Ahmed Madoobe waxaa Nabad iyo Nolol la timid Barnaamij Cusub oo ay Ahmed Madoobe ku sheegeen in ay Labo Sano u Sharciyeeyeen.
Xamar Amni ma aha, waxaana xiran wadooyinka oo dhan waxaa intaas dheer Shabaab oo ka gurata Canshuur joogtaa maalinkasta .
Si marka Nabad iyo Nolol u daboolaan Ceebaha dul hoganaya waxay la yimaadeen qorshe Tastuurka lagu jabinayo dadka Soomaaliyeedna la isaga hor-keenayo kaas oo Muqdisho lagu siiyay Sadex iyo Toban Xildhibaan oo Sooryaa.
Waxaa qaylo dhaan ka keenay dad badan oo Soomaaliyeed, intaas Nabad iyo Nolol kuma e kaane waxay keeneen Afhayeenkoodii Doorashada Xaliimo Yaray, taas oo sheegtay in aysan Doorasho Hal qof iyo Hal Cod dhicikarin laakiin loo bahan yahay si ay u dhacdo in Nabad iyo Nolol waqti loogu daro.
Maanta wali lama dhamaystirin Tastuurkii Dalka, lama dhisin Ciidan Qaran oo Soomaaliyeed, lama Xorayn deegano badan oo Shabaab Haysato.Intaas waxaa dheer Nabad iyo Nolol kama shaqayn sidii ay isugu soo dhawaan lahaayeen Dawlada Fadaraalkaa iyo Dawlad Goboleedyada.
Intaas waxaa dheer, Dhaqaalihii Beesha Caalamku ugu Yaboohday Soomaaliya waxuu ku dhamaaday kana Siib kana Saaar.
Hantidii umada Soomaaliyeed ee Bada sida Kaluunka waxaa laga kireeyay China wax kasoo xaroodana lama yaqaan iyo wax lagu qabto. Xuduudeenii Bada ee Kenya Muranka galisay waxaa la cayriyay Qareemadii u doodayay umada Soomaaliyeed waxaana Nabad &Nolol Miiska hoostiisa galisay Rajadii umada Soomaaliyeed filayeen markay Xukunka qabteen.
Hantida Bariga, Qayraadkii dalku lahaana maanta waa Xaraash waxaana cod lacageed lagu Marsaday Gollaha Shacabka ee maanta Jooga.Waxaa loo ban dhigay in uu Xaraash yahay Caalamka oo dhan waxuuna Nabad iyo Nolol Wasiirkooda Qayraadku sheegay in Ceelasha Qaar Sooryo loo siindoono SOMAOIL AND GAS.
Soo noqoshada Nabad iyo Nolol waxay Soomaaliya u horseedi doontaa isqab-qabsi joogtaa, wax qabad la’aan, iyo Xoolaha umada Soomaaliyeed oo la Xaraasho.